अष्ट्रेलियाबाट नेपाल घुम्न जाने र फर्कनेलाई फ्रीमा नेपाली खाना खुवाउँछु — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्तर्वार्ता > अष्ट्रेलियाबाट नेपाल घुम्न जाने र फर्कनेलाई फ्रीमा नेपाली खाना खुवाउँछु
प्रस्तुत छ, अष्ट्रेलियाका लागि अवैतनिक पर्यटनदुत नील थपलिया र अर्थतन्त्रका प्रधान सम्पादक रामेश्वर कार्कीबीच भएको संवादको सम्पादित अंश :
यहाँको परिचय ?
मेरो नाम नील थपलिया । जन्म चितवनको भन्डारा । भन्डारा माध्यमिक विद्यालयबाट १० कक्षासम्मको अध्ययन । म गाउँको मध्यम वर्गिय परिवारमा हुर्र्किएको मान्छे हुँ । एक साधारण किसानको छोरो, घरायसी काम गर्दै हुर्किएँ । जब कलेज जाने बेला आयो तब पढ्नको लागि देश बाहिर जाने परम्परा बसेका थियो चितवन जिल्लामा ।
पढाइकै शिलसिलामा सन् १९९८ मा सिंगापुर गएँ । ३ वर्ष फुड एण्ड वेभरेज अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएर काठमाडौंको पुतली सडकमा सिङगापुरबाटै आएका केही साथीभाईहरु मिलेर एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेँ । ४-५ महिना ब्यापार राम्रै चल्यो । त्यस बेला मुलुकमा चर्किएको द्वन्दले माहोल राम्रो लागेन र बेलायत गएँ । २००८ सम्म ७ वर्ष बेलायत बसेँ । २००८ मै विवाह गरेर डिपेन्डेन्ट भिषामा विद्यार्थीको रुपमा अष्ट्रेलिया गएको हुँ । हाल गुर्खाज नेपाली रेष्टुरेण्ट नामबाट नेपाली स्वाद दिलाउन रेष्टुरेन्ट ब्यवसायमा संलग्न छु । यही वर्ष नेपाल पर्यटन बोर्डबाट अवैतनिक पर्यटन दुतको रुपमा नेपाल चिनाउने अवसर पाएको छु ।
किन जानु भयो अष्ट्रेलिया, के काम गर्नु भयो ?
त्यतिबेला अष्ट्रेलिया जाने भनेको प्राय त विद्यार्थी भिषा नै हो । बसाइँसराइ गरेर जाने कमै थिए त्यतिबेला । १० हजार जति मानिसहरु थिए होला त्यतिखेर । हामी पनि विद्यार्थी भिषामै गएको हो पढ्ने माध्यम बनाएर । तर, इन्टेन्सन त त्यहाँ पढ्ने भन्दा पनि हामीलाई स्ट्याब्लिश हुनु थियो । व्यावसाय गर्नको लागि राम्रो ठाउँ खोजिरहेका थियौँ । विद्यार्थी भिषालाई एउटा मध्यम बानाएर जाँदा अस्ट्रेलियाले थोरै सहज वातावरण बनाइदियो ।
पहिला श्रीमतीले पढिन् । श्रीमतिको डिपेन्डेन्ट भिषामा म गको हुँ । मेरो हस्पिटालिटी पहिला देखिकै प्यारो विषय भएकाले सिंगापुर र बेलायतमा पनि पढ्न जान्थें । त्यहाँ मैले कोकरी भन्ने विषय ज्वइन्ड गरेँ । ६-७ महिनासम्म बिज्नेस प्लानदेखि सबै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । नान्दोज भन्ने कम्पनीमा स्टोर म्यानेजरको काम गर्थें । त्यहाँ पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । त्यसपछि म आफैं केही गर्न सक्छु भनेर रेष्टुरेण्ट व्यवसाय सुरु गरेँ ।
सुरुवातमै रेष्टुरेण्ट शुरु गर्नुभयो ?
हजुर मैले सुरुवात नै रेष्टुरेण्टबाट गरेँ । सन् २०१२ मा पर्थको मुख्य सहरमा व्यवसाय सुरु गरेँ । मैले ८-९ लाख डलर लगानी गरेको छु । लगानी र फाइदा भन्दा पनि मलाई गर्व केमा छ भने सात समुन्द्र पारी गएर २०–३० जान नेपालीलाई रोजगारी दिन पाएको छु । मेरा लागि त्यो नै ठूलो कुरा हो । त्यो ठाउँमा बसेर गर्वका साथ गुखार्ज नेपाली नामको रेष्टुरेन्ट खोलेको छु । जसले नेपालीलाई एकदमै नजिकबाट चिनाउँछ ।
कति छन नेपाली अष्ट्रेलियामा ?
डाटा भन्दा बाहिर कति छन् त थाहा छैन । तर ९० हजार देखि १ लाख जति नेपालीहरु स्ट्याब्लिश नै भएर बसेका छन् ।
कस्तो छ नेपालीहरुको अवस्था ?
राम्रो छ । हाल अष्ट्रेलिया अन्य मुलुकको तुलनामा सुरक्षित छ । अलि कति गर्मी ठाउँमा बस्नेहरुका लागि त्यहाँको वातावरण ठिक छ । साथै हातमा सीप लिएर जानेहरुको लागि अष्ट्रेलिया धेरै राम्रो छ । तर सीपबिना विद्यार्थी भिषामा रुखै पैसा टिप्छु भन्नेहरुका लागि भने गाह्रै छ ।
जस्तै शेष घलेलाई हेर्ने हो भने उहाँ पनि अष्ट्रेलिया आउनु भएको धेरै भएको छैन । १८–२० वर्ष अघि आउनु भएको हो । उहाँले नेपालीको निकै राम्रो पहिचान बनाएर बस्नुभएको छ । उहाँ मात्रै नभएर अरुले पनि धेरै प्रगति गर्नु भएको छ । म पनि अस्ति भर्खरै अष्ट्रेलिया आएको हो । मैले पनि नेपालबाट केही लगेको होइन । यहीँ दुःख गरेँ, संघर्ष गरेँ, मेहेनेत गरेँ, धैरे गरेँ । गर्नेहरुको लागि राम्रो अवसर छ अष्ट्रेलिया ।
तपाईं त नेपाल पर्यटन बोर्डको अवैतनिक पर्यटन दुत पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म नेपाल सरकारबाट कोडभएको एक वर्ष पुग्दै छ । मलाइ के लाग्छ भने हामीलाई जुन पद दिइएको छ, वि आर राइट पर्सन, किनभने हाम्रो हप्तामा ५ हजार पर्यटकहरुसँग कुराकानी हुन्छ । ती मध्ये सबैसँग त फुर्सद नहोला तर पनि मैले मेरा स्टाफहरुलाई तालिम दिएको छु । हरेक भित्ताको टिभिहरुमा नेपालका डकुमेन्ट्रिहरु राखेको छु । मैले भर्खरै मेन्युमा पनि एकापट्टी खाना राखेर अर्कोपट्टी नेपालको पर्यटकिय स्थलहरुको दृष्यहरु राखेको छु । जसले गर्दा उनीहरुले हेरेर पल्टाउँछन् वाउँ नेपाल भन्छन् । उनीहरु सबैलाई नेपालको बारेमा थाहा न भएको भए पनि थाहा पाउँछन् । मैले जो मान्छे मेरो सम्पर्कमा नेपाल आउन खोज्छन्,उनीहरुलाई सबैलाई एक छाक खाना फ्रीमा खुवाउने घोषणा गरेको छु । नेपाली खानासँग घुलमिल गराउनलाई, चिनाउनको लागि मैले निःशुल्क खाना खुवाउँछु । उनीहरु नेपाल आउँछन् घुम्छन् र फेरी फिडब्याक लिनको लागि निःशुल्क खाना खुवाउँछु । उनीहरुले भोगेको दुःख–सुख, सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउन सहयोग पुर्याउँछु ।
डकुमेन्ट्री देखाउँछु भन्नु भयो अलि प्रष्ट गरिदिनुस न ?
मैले लगभग ३ वा ४ घण्टाको डकुमेन्ट्रि नेपालबाट मगाएको छु । त्यस्तै विदेशीहरुले आएर आफैँले पनि बनाएको डकुमेन्ट्रिहरु पनि मिलाएर कहिले हिमाल, कहिले पहाड त कहिले तराई कहिले चितवन, कहिले बुद्घहरुको फेरीफेरि देखाउने गरेको छु । लगभग हप्तामा ३ वा ४ वटा परिवर्तन गरेर देखाइ रहेको छु । सँधै एउटै खालको डकुमेन्ट्री देखिरने ग्राहकहरुलाई अल्छि लाग्छ भनेर यसो गरेको हो ।
विदेशमा बसेर पनि आफ्नो देशका निम्ति जे गरिरहनुभएको छ, यस्तो कामबाट कस्तो प्रतिकृया पाउनु भएको छ ?
मैले धेरै राम्रो प्रतिकृया पाउने गरेको छु । अष्ट्रेलियनहरुको लागि बेस्ट पर्यटकीय गन्तब्य नेपाल बन्दै आएको छ । किन भने नेपालसँग उनीहरु धेरै नजिक छन् । घरमा खाना खाएर राती २ बजेको फ्लाइट लिइयो भने बिहान १२ बजे लन्च खान नेपाल आइपुगिन्छ । यति मिलेको फ्लाइट अष्ट्रेलिया लाई बाहेक अरु छैन । नेपालमा जस्तो प्रकृतिक चिजबिचहरु अन्त गएर पाइँदैन । त्यसैले उनीहरुको लागि नेपाल बेस्ट डस्टिनेसन हो । त्यो कुरा उनीहरुले पनि भन्छन् । त्यसैले पनि उनीहरुलाई पहिलो पटक नै प्रभाव पार्नको लागि रेस्टुरेन्टले सानो सानो कुरामा पनि ख्याल गरेर सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
मैले सबैलाई यदी तिमीहरुलाई नेपाल मन परेन भने म सबैको पैसा फिर्ता दिन्छु भन्ने गरेको छु । तिमीहरु डेफिनेट्ली खुशी भएर आउने छौ भनेको छु । पछि कोही कोहीले त उल्टै मलाई उपहार लिएर आउने गरेका छन् । त्यसैले धेरै राम्रो र सकरातमक फिडब्याक छ ।
पर्यटन दुत भैसकेपछि नेपालीहरुबाट कत्तिको गुनासे सुन्नु पर्छ ?
सहि प्रश्न गर्नु भयो । केही छन् त्यस्ता अबुझहरु जो यति ठुलो विकसित राष्ट्रमा आएर पनि ढुंगे युगको व्यवहार गर्छन् । सर्व प्रथम त के हो यो पर्यटनदुत भनेको र के देखेर कस्तो प्रकारको मान्छेलाई दिने भन्ने कुरो बुझ्दैनन् । तलव नै खाएर बसेको जस्तो हचुवामा बोल्छन् । तर मलाई राम्रोसंग थाहा छ मेरो जिम्मेवारी के हो र कसरी बहन गर्नु पर्छ भनेर । त्यसैले यस्तो अबुझहरुको पछाडी लाग्दिन र मसंग समय पनि छैन त्यो बाटो हिँड्नलाई ।
त्यहाँ बसेर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति अरु के के सोच बनाउनु भएको छ ?
त्यस्तो ठुलो योजना छैन । किनकी हामी भोलेटरी बेसमा काम गर्ने हो । मैले भर्खरै लगभग २ हजार डलर खर्च गरेर आफ्नै लगानीमा आफ्नो व्यवसायीक गाडीमा नेपाल झल्काउनेदेखि अरु विभिन्न पोष्टरहरु बनाएँ । मैले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि परिवार र व्यवसायबाट समय निकालेर विभिन्न स्कुलहरुमा जाने र नेपाल घुम्न जान आग्रह पनि गरिरहेको छु । फेरि अहिले हाम्रो नवनियुक्त राजदुत लक्की शेर्पा भर्खरै जानु भएको छ । निकट भविष्यमा राजदुतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डसंग सहकार्य गर्दै काम गर्ने योजना बनाएको छु । तर पर्यटन प्रवद्र्धन भने मेरो दैनिकी जस्तै हो । मेरो व्यवसायीक गाडी दिनमा ४–५ सय किलोमिटर पर्थको विभिन्न भागमा गुड्छ । अनि मेरो रेष्टुरेन्टमा आउने झण्डै २–३ सय गोराहरुसंग दिनदिनै प्रत्यक्ष कुराकानी हुन्छ । जुन पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि उनीहरुलाई कन्भिन्स गर्ने उपयुक्त पाटो हो भन्ने मैले पाएको छु । त्यो साथ साथै मैले अघि नै भनें, रेष्टुरेण्टमा भएका विभिन्न किसिमका नेपाल झल्काउने चिजदेखि लिएर नेपाली खाना मःमः, छोइला, भटमास लगायत चिजहरुले अझै प्रेरित बनाउँछ गोराहरुलाई । यसले उनीहरुलाई पर्यटन प्रवद्र्धन प्रति सकारात्मक अनि नेपाल जाउँ जाउँ लाग्ने महत्वपुर्ण सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाईहरुले त्यहाँ बसेर नेपाल जाऊ–जाऊ भनेर मात्र पनि पर्यटन प्रवद्र्धन खासै नहोला, यहाँ आइसकेपछि सरकारी तवरबाट कस्तो खालको आकर्षण गर्नु पर्ला ?
वास्तवमा हामीले मात्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर केही हुनेवाला छैन । नेपाल सरकारले पनि केही व्यावस्था गरिदिनु पर्यो । एयरपोर्टका ट्वाइलेटदेखि शुरु भएर वातावरण सरसफाइहरु गरिदिनु पर्यो । हामीहरु ८० जना जति छौं हामीलाई समन्वय गरेर केही जिम्मा दिनुस् । राज्यले पैसा दिन सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा दिनुस केही दिनु पर्दैन मात्र ३ महिना समय भए पुग्छ । हामी एउटा सिस्टम बनाएर जान्छौँ ।
भएको चिजलाई व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो भने अबको दश वर्षसम्म नेपाललाई चाहिने भन्दा धेरै पर्यटकहरु आउँछन् । नेपालमा धेरै चिज छ तर व्यवस्थापन भएन । जस्तै वासरुम, ट्रली, लगेजहरु आउने चिजहरु, एयरर्पोटबाट बाहिर निस्किँदा वेइटिङ, ट्याक्सिहरुको व्यवस्थाहरु हुनुपर्यो । किन भनेँ मानिसहरुको अट्रयाक्सन पहिला झर्ने बित्तिकै हुन्छ ।
यदि स–साना कुराहरुमा ख्याल गरिदियो भने पर्यटकहरुले त्यस्तो ठूलो इस्यु बनाउँदैनन् । सबैलाई थाहा छ नेपाल गरिब देश हो भनेर ।
त्यति ठूलो स्रोत साधनको उनीहरुले आशा पनि गरेका हुँदैनन् । थोरै पैसामा घुमघाम गर्न, होलीडे मनाउनको लागि भनेर आएका हुन्छन् । उनीहरुले पनि अमेरिका, बेलायतको जस्तो खोजेर त पाउँदैनन् । तर पनि उनीहरुलाई होलीडे मनाउन आउनको लागि नेपालमा पर्याप्त ठाउँ छ ।
नेपालमा लगानीको वातावरण चाहीं कत्तिको उपयुक्त छ ?
लगानीको कुरामा त सरकारले वातावरण पनि बनाउनु पर्छ । एनआरएनए भनेको सबै भन्दा धनी संस्था पनि हो । यति धेरै पैसा छ तिनीहरुसँग, यति आतुर छन् मान्छेहरु नेपालमा लगानी गर्न । मलाई पनि लगानी गर्न मन छ तर मुख्य कुरा सुरक्षाकोे व्यवस्था हुुनु पर्छ । यदि नेपालले लगानीको सुरक्षामा ख्याल गर्यो भने नेपाल विकास हुन धेरै बेर लाग्दैन । निकट भविष्यमा नै मेरो नेपालमा पाँच तारे होटेल खोल्ने योजना छ ।
प्रकाशित मिति : १० साउन २०७४
२०७४ साउन १० गते १७:१६ मा प्रकाशित
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एमालेले प्रशिक्षण दिन सुरु गर्यो
कोरिया भाषा परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक
केबलकारमा दुई बैंकको ६६ करोड लगानी, ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई
अब प्लास्टिकबाटै तेल, वार्षिक साँढे आठ लाख किलोलिटर उत्पादन हुने
स्याङ्जाबाट भागेका ती १३ वर्षे बालक, जो अहिले भारतकै धनाढ्य बन्न पुगेका छन् !
कानुनको सर्वोच्चता विरुद्धका गतिविधि सैह्य हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली